Tilmaamayaasha Muhiimka ah ee Falanqaynta Farsamada ee Loo Adeegsado Ka Ganacsi | vfxAlert official blog
Tirooyinka ugu muhiimsan ee falanqaynta farsamada
Haddii aad rabto inaad si cad u fahamto xaaladda suuqa, waa inaad ku dabaqdaa qiimeynta muuqaalka ee tirooyinka garaafka ee falanqaynta farsamada. Nooca falanqaynta noocan ahi waxay bixisaa xog ka saxsan kuwa tilmaamayaasha maxaa yeelay waxay ku shaqeeyaan algorithms-ka la qorsheeyay iyo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah. Xaaladaha badankood, waxaad ku shaqeyn kartaa laambadaha Japan.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida lacagta looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah , waa lagama maarmaan in wax badan laga barto tirooyinka garaafka ee loo adeegsado ganacsiga. Qaababka sawirka waxaa loo kala saaray laba nooc. Qaababka dib-u-noqoshada waxay muujinayaan isbeddelka isbeddelka hadda socda. Qaababka kale waxay xaqiijinayaan sii socoshada isbeddelka marka xoojinta aan qiimaha lahayn ama qiimaha sixitaanka uu u dhaqaaqo hal jiho. Tirooyinka qaarkood way fududahay, wayna fududahay in lagu aqoonsado jaantuska. Si kastaba ha noqotee, ha ilaawin tirooyinka dhifka ah, sida Diamond ama ZUP Starter complex (Gartley “butterfly” iyo Pesavento).
Head iyo Garbaha
Jaantuskan waxaa lagu aqoonsan karaa hanti kasta iyo waqtigeeda. Qaabka "Madaxa iyo Garbaha" wuxuu ka kooban yahay saddexda isku dherer / ugu hooseeya ee maxalli ah. Xarunta iyo dhinacyada ugu sarreeya waa "Madaxa". Uguyaraan, waxaa jira heer taageero, tanna waxaa lagu magacaabaa "qoorta." Dhinacyada yaryar waxaa loo yaqaan "Garbaha".
Waa tan hannaanka loo sameeyay qaabkan farsameed:
Kor u kaca ayaa soo baxaya.
Waxaan sugeynaa tirada inay soo baxdo. Garabka bidix waa ugu badnaantii ugu horreysay ee maxalli ah. Kadibna waxaan rajeyneynaa hoos u dhaca qiimaha oo leh hoos u dhac isku mid ah mugga. Deyrtan ayaa xaqiijineysa in isu dheellitirka xoogagga loo wareejiyay iibiyeyaasha. Markii sixitaanka la dhammeeyo, waxaan heleynaa barta bilowga ee qadka "qoorta".
Isbeddelku wuu socdaa. Hadda waxaan helnay ugu badnaan cusub ama "madax". Ugu badnaan waa inuu ka sarreeyaa kan hore.
Garabka midig waxaa loo abuuray si la mid ah. Qaabka caadiga ah "garbaha" waa isku mid, laakiin dhab ahaantii, xaaladaha noocaas ah badanaa ma dhacaan. Haddii garabka midig ka weyn yahay (qiyaas ahaan, ma ahan waqtiga macluumaadka) waxay ka dhigeysaa calaamaddu mid sii xoogaysanaysa dhammaadka kor u kaca. Waxaan sugeynaa marka barta ugu dambeysa ama astaamaha xariiqda "qoorta" ay soo muuqan doonto.
Qaado Macaashku wuxuu ku yaal barta ugu sarreysa ee "garabka" midig. Waxaad aragtaa qiimaha ugu sarreeya ee la xisaabiyay. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer fiiri xaaladda hadda jirta oo raac calaamadaha ganacsiga ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waxaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la isticmaalo joogsiga gawaarida si loo xiro macaamilka hore!
Waxaa jira nooc la rogay oo ah "Madaxa iyo Garbaha". Jaantuskani wuxuu muujinayaa kor u kaca.
Tilmaamaha falanqaynta :
Qaababkani waxay u muuqdeen waqti dheer. Natiijooyin wax ku ool ah ayaa lagu arkaa xilliyada Mans-ka M15-M30;
Qaybta ugu weyn ee xaqiijineysa istiraatiijiyadda ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ah waa saxitaanka qiyaasta suuqa Waa inay ku koraan qaybta "Garabka Bidix - Madaxa" waxayna ku dhacaan "Madaxa - Garabka Midig". Sidoo kale, mugyadu waxay bilaabaan inay kordhaan xilliyada loo soo bandhigo isgoyska qoorta;
Ha furin ikhtiyaarka adigoon oggolaan burburka ama ku soo celinta khadka taageerada. Sidoo kale, uma baahnid inaad raadisid dhammaan kharashyada "Madaxa-Garbaha" halkaasoo ficil ahaan aysan jirin.
Triple Sare / Hoose
Qaababkani waxay tixraacayaan kooxda kuwa rogay. Qaab dhismeedkoodu waa kala duwanaanshaha tirooyinkii hore.
Sidee tiradaasi "/ Triple Top ugu hooseysa" foomamka:
1. Burburka ka dib, heerka iska caabintu wuxuu noqdaa taageerada (qoorta) shaxda xigta. Qiimaha kor u kaca wuxuu ku dhammaanayaa ugu badnaan A, iyo istaraatiijiyada ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ah waxay muujineysaa calaamadda dib u celinta ugu horreysa;
2. Mid ka mid ah mabaadi'da gorfaynta farsamada ayaa sheegaysa in sixitaanku aanu ka dhignayn isbeddel cusub oo cusub. Xaaladdeena, iibsadayaashu waxay furaan boosas cusub waxayna u jiheeyaan isbeddelka, ugu badnaan tan xigta C. Halkan waxaa ku yaal macaamil ku-meel-gaar ah oo ku-meel-gaadh ah, oo hoos u dhigaya Joojinta Joojinta ka-qaybgalayaasha suuqyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ee isbeddelka heerka taageerada;
3. Marka ka-qaybgalayaasha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ahi ay u istaagaan inay ka ganacsadaan suuqlayda waxay u dhaqaajin karaan suuqa si ay uga faa'iidaystaan aagga saddexaad ee ugu sarreeya E. Kadibna suuqa, inkasta oo xogta falanqaynta ee xaqiijineysa dhaqdhaqaaqyada kor u kaca, ay si lama filaan ah u dhici karto ama u dhaqaaq dhaqdhaqaaq dhinac ah.
Muraayadda "Triple bottom" waxay soo bandhigaysaa bilowga kor u kaca. Jebinta qoorta labada xaaladoodba waxay keenaysaa isbeddel deg deg ah oo mugga ah: u kordha kan ugu sarreeya (hoose), hoos u dhig kan labaad iyo saddexaad ee ugu sarreeya / ugu yar. Kadib markale waxaa jira koritaan kadib burburka heerka taageerada.
Calaamadaha saddexda qaab marwalba way ka deggan yihiin kuwii hore "Laba-garba-garba". U ogolow in ay waqti badan qaataan si ay u sameystaan, ka leexasho badan aragtida caadiga ah, laakiin xaqiijintooda tilmaamayaasha ayaa ah mid lagu kalsoonaan karo, gaar ahaan waqtiyada sare. Jaanqaadkaan badanaa waxaa weheliya kala duwanaansho, taas oo aad si badbaado leh ugu furan karto macaamil macaamil kordhin .
Sidaad ogtahay, waxaa caqli gal ah inaad soo gasho suuqa ka dib markii 2-3 dib loo tijaabiyay heerka qoorta. Qaado Faa'iido waa in la dhigaa ugu yaraan kalabar masaafada illaa seddexaad ugu badnaan shaxanka; xaalad kale; waxaad ku waayi kartaa faa iidooyinka ugu badan isbedelka soo socda. Jooji Joojinta ama waqtiga binary dhicistiisa waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo isbedelka caadiga ah ee hantida inta lagu jiro 5-7 maalmood ee la soo dhaafay.
Saddex-xagal waa mid ka mid ah tirooyinka ugu caansan ee falanqaynta farsamada. Waxaa jira dhowr nooc oo saddexagal ah. Waxaad ku arki kartaa tirooyinkan garaafka markii ay jiraan wax aan jirin oo suuqa ka jira ama ay jirto sinnaan ku meel gaar ah oo awoodaha u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyaasha. Kadib, isbeddelku guud ahaan wuu sii socdaa.
Fuulayaa . Xadka ugu sarreeya ee jiifka ah ee qiimaha xiritaanka wuxuu u shaqeeyaa sidii heer iska caabin ah, barta isgoyska (sare) iyo isbeddelka ayaa kor loogu fiiqay qaabka, xaglaha hoose (taageerada) sidoo kale waa la tilmaamay. Waad aragtaa, diapason-ka qiimaha kicinta ayaa hoos u dhacaya. Burburka xadka sare wuxuu muujinayaa sii socoshada kor u kaca. Marka loo eego mabaadi'da falanqaynta suuqa, gadaashiisa waxay ku xiran tahay amarrada BUY iyo heshiisyada ganacsadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah.
Ka soo degaya Jaantuskan, waxaad arkaysaa xaalad ka soo horjeedda. Hadda kore waa kan hoose. Soohdinta hoose waa heerka iska caabinta, xagga sare waa taageerada. Xaddiga isbedbeddelka ayaa yaraaday. Hadda xuduudaha waxay ku yaalliin qiimaha ugu dambeeya ee ugu yaraan saddex hoos u dhac maxalli ah. Waxaan ubaahanahay jabinta iska caabinta si aan u sii wadno hoos u dhaca, halkaas oo aan ka heli karno amarrada iibka ee sugaya.
Calaamado . Saddex-xagalkani waa qayb ka mid ah kooxda qaababka dhexdhexaadka ah ee xuduudaha u cidhiidhyaan qiyaastii xaglo isku mid ah. Badanaa waxaa jira wax ku filan oo lagu xaqiijinayo sinnaanta ku-meel-gaarka ah ee awoodaha u dhexeeya dibiyada iyo bahasha, isla suurtagalnimada burbur, labadaba kor u kaca iyo dhicitaanka. Macluumaadka tirakoobka wuxuu xaqiijinayaa faa iidada yar ee dhanka garaaca wadnaha ugu horeeya, waxaad dejin kartaa labo amar oo sugitaan ah oo jihooyin badan leh. Raac xaaladda si aad u guurto ama u joojiso amarka waqtiga ku habboon. Xaalad kale, waxaad geli kartaa "qalcaddii", taas oo ay adkaan doonto in laga baxo arrimo la'aan.
Ballaarinta . Khadadka shaxanka ayaa kala firidhsan, iyadoon loo eegayn xagalka u dhexeeya. Barxadda ganacsiga laba-geesoodka ah waxay soo bandhigeysaa wax badan ama xad dhaaf ah. Suuqa sameeyayaashu waxay ku dhowaadeen inay ganacsadaan, kaliya mala-awaalayaasha ayaa saameyn ku leh dhaqdhaqaaqa qiimaha. Xitaa isbeddelada yaryar ee mugga waxay sababaan isbeddello muhiim ah oo aan la saadaalin karin. Way fiicantahay inaad ka tagto suuqa ama haddii ballaca saddexagalka uu kuu oggolaanayo inaad kula shaqeyso boosaska lulid-gaaban. Jebinta soohdintu waxay u baahan tahay xaqiijin cad oo ka timaadda oscillators iyo tilmaamayaasha.
«Wareeg» Jaantuskan ayaa soo baxaya marka suuqa ay ku jiraan kaliya mala-awaalo yaryar iyo kuwa dhexdhexaad ah. Xaaladdan oo kale, sicirku wuu u dhaqaaqi karaa labadaba hoos iyo korba xitaa isbeddel aan qiimo lahayn oo ku saabsan mugga suuqa. "Wedge" way adkaan kartaa in la aqoonsado, maxaa yeelay muuqaal ahaan qaabkani wuxuu u eg yahay kanaal isbeddel ku socda. "Wedge" waxay muujineysaa sii wadida inta lagu jiro dib u celinta iyo sixitaanka. Haddii loo jiheeyo dhanka isbeddelka, waxay noqon doontaa calaamadda dib u noqoshada.
Kaliya u janjeedha muddada-dheer iyo dhexdhexaad ayaa sameyn kara "wedge" gebi ahaanba. Kadibna sida caadiga ah waxaa looga shaqeeyaa si sax ah iyadoo hanti badani jirto. Ka ganacsiga kaararka waqtiyada ka hooseeya H1 laguma talinayo maxaa yeelay calaamado badan ayaa jira. Maaddaama moodalku tilmaamayo suuq adag, qaabab kale ayaa ka dhalan kara, sida noocyada xasilloon ee saddexagalka .
Xaaladaha badankood, burburka wuxuu ka dhacaa aagga bartamaha illaa 70% dhererka heerka jiifka;
Qaababka saddex geesoodka ah waa inay ku jiraan oo keliya tiro aan caadi ahayn (ugu yaraan 5) hirarka si loo tixgeliyo inay dhammaystiran yihiin. Ha ka shaqeyn suuqa illaa xaaladdan la buuxinayo!
Muga waa in la yareeyaa iyadoo si xoog leh loo kordhinayo meel u dhow heerka kala-goynta, maaddaama heerka dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa qiimaha uu hoos u dhacayo. Waxaan kormeernaa dhaqdhaqaaqa, waxaa laga yaabaa inay jiraan calaamado dheereeya!
Burburka qof kor u kacaya ama soo degaya oo ka soo horjeeda dhaqdhaqaaqa weyn ee xaaladda ugu badan ayaa noqon doona been;
Dadka dhowaan yimid laguma talinayo inay ka ganacsadaan gudaha saddex-xagalka, gaar ahaan calaamadaha bilaashka ah ee bilaashka ah.
"Pennant" iyo "Flag"
Labadan tirooyin kale waxay soo muuqdaan kadib muddo aan wax laga qaban. Caadi ahaan, "calanka" iyo "qalin" hortiisa, waxaad ku arki doontaa koror xoog leh ama dhicitaan. Dhaqdhaqaaqa fiiqan waxaa lagu xaqiijin doonaa mugga weyn. Waxa kale oo jira xeelado tixgeliya tirooyinkan inay yihiin calaamadaha dhacdooyinka muhiimka ah. Haddii burburka uu ka soo horjeedo isbeddelka hadda jira, warkan ayaa ka sii xumaan kara saadaasha.
Noocyada qaabeynta :
Jaantuska shaxanka "qalin" wuxuu umuuqdaa saddexagal xagal la'aan ah;
Muddada ugu yar ee la aasaasayo tirooyinka 10-15 baararka ee waqtiyada shaqada;
Cadeyn bilow bilow ah, badanaa qiime (faraq);
Waxaa jira "calamada calanka" oo muuqata. "Calanka calanka" wuxuu ku yaal xagal baaxad weyn oo jaantuska ah inta udhaxeysa bilowga sawirka iyo jabinta ugu horeysa ee heerka taageerada / iska caabinta;
"Calan" waa dhaqdhaqaaq dhinac ah. Dhaqdhaqaaqani wuxuu noqon karaa mid jiifa ama tilmaamaya dhanka dhabta ah (hoos u dhac kor u kaca iyo hoos u dhaca hoos u dhaca).
Qaado Macaash waxaa lagu xisaabiyaa calanka. Amarada soo socdaa waxay ku dambeeyaan heerka ugu dambeeya. Dhererka nuska ah, waxaa lagu talinayaa in la xiro qayb ka mid ah booska ama si loo yareeyo khasaaraha dhaqaale.
"Calan" iyo "qalin" ayaa soo muuqday inta lagu jiro xilliyada ay kuwa wax suuq sameeya dibadda ka baxaan. Way ka aamin badan yihiin saddexagalka. Taasi waa sababta markii aad sameyso tallaabooyinka ugu horreeya adduunka ganacsiga, waxaad marka hore baran kartaa inaad aqoonsato tirooyinkan. Kadib, waxaad u guuri kartaa qaababka isku dhafan. Iyadoon loo eegin istiraatiijiyadda iyo calaamadaha binary, waxaad u baahan tahay inaad xusuusato qaanuunka: kor u kac fiiqan oo dhicitaanku wuxuu dhacayaa ka hor dhaqdhaqaaqa dhinaca .
Wareegsan dusha iyo hoose
Tirooyinkan waxaa loo isticmaalaa falanqaynta muddada-dheer iyo muddada-dhexe. Waxay ku habboon yihiin ganacsiga xasilloon. Dhaqdhaqaaqa noocan oo kale ah ee qiimaha ayaa muujinaya kororka mugga iyo tirada jagooyinka la sugayo ee ciyaartoyda waaweyn ee ka dhanka ah isbeddelka. Tani waxay ka dhigan tahay inay xirmi doonaan 2-3-da bilood ee soo socota.
Waxaad ku arki kartaa tirooyinkan inta badan usbuucyada iyo maalin walba waqtiyada. Hantida ayaa lagama maarmaan u ah inay lahaato isbeddel dhexdhexaad ah ama hooseeya, iyada oo aan dhaqdhaqaaqyo mala-awaal ah oo soo noqnoqda. Haddii aad rabto inaad qeexdo xoogga isbeddelka iyo daqiiqadda uu isbeddelayo, ku dabaq heerarka Fibonacci. On timespans weyn, waxay bixiyaan dhibco tixraac lagu kalsoonaan karo soo noqoshada soo socota, isbeddelada taageerada qiimaha, iyo iska caabin ah. Sidoo kale, waxaad u adeegsan kartaa saldhig ahaan inay kaga ganacsadaan waqtiyada gaagaaban.
Tirooyinka isku dhafan ee falanqaynta farsamada
Tirooyinka horay loo sharaxay waxaa lagu sifeeyay inay yihiin "fudud" marka la eego falanqaynta farsamada waxay:
1. Muuji marka suuqa uu kujiro xaalad aan lagaranaynin, xaalada noocaas ah waxay dhacdaa xitaa inta lagu jiro xilliyada isbedelka xoogan;
2. Waxaa lagu go'aamiyay oo keliya jaantuska iyada oo aan la isticmaalin qalab dheeri ah.
Newbies waa inay kaliya adeegsadaan qaabab fudud ama calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah, oo lagu daro celceliska celceliska dhaqdhaqaaqa iyo oscillators sida RSI ama MACD!
Markaad barato inaad aqoonsato tirooyinka fudud, waxaad u dhaqaaqi kartaa qaababka aadka u kakan. Tani waxay u baahan kartaa waqti iyo khibrad gaar ah.
Ganacsatada khibradda leh waxay isticmaali karaan qaabab aad u adag, sida "Butterfly Gartley" iyo "Diamond". Aan ka hadalno iyaga.
Jaantuskan dib u celinta wuxuu xambaarsan yahay magaca qoraaga Harold Gartley. Balanbaalis Gartley wuxuu ku saleysan yahay taxanaha Fibonacci. Qaybta madow, qaybaha madow waxay muujinayaan dhaqdhaqaaqa suuqa, saamiga guduudan ee heerarka Fibonacci illaa masaafada uu qiimaha udhaxeeyay heerarka. Waxaa jira tilmaamayaal gaar ah sida ZUP oo fududeeya dhismaha iyo falanqaynta.
Intii lagu guda jiray sameynta, dhammaan tirooyinka Gartley aad ayey u deggan yihiin, laakiin markii moodelku dhammaado, hubaasha calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa gaaraya 85%. Faa'iidada Qaadashada ee ugu horreysa marwalba waa la shaqeeyaa, gaar ahaan H1 iyo waqtiyada ka sarreeya. Inta lagu guda jiro qiimeynta, fiiri suurtagalnimada "dhicin" waqtiyo gaagaaban, tani runti waxay kordhisaa kalsoonida barta furitaanka.
Qaabkani badanaa kuma soo baxo suuqa Forex. Si kastaba ha noqotee, waxay ku siin kartaa faa'iido weyn. Waxay ka kooban tahay balaadhinta iyo saddexagalka iskudhafka leh ee dusha sare leh, waxay u soo baxday laba macne: jadwalka waqtiga ee laga soo qaatay D1 iyo wixii ka sareeya wuxuu muujinayaa isbeddel ku yimid, kuwa yaryarna tani waa sii socosho.
Jaantuska "Diamond" wuxuu bixiyaa dhibco gelitaan sax ah. Si kastaba ha noqotee, tirada noocan oo kale ah waxay u baahan tahay waqti dheer si loo sameeyo. Waa lagama maarmaan in la sugo illaa dhamaadka shaxanka, oo u eg kara "Madaxa iyo Garbaha", laakiin xaaladdan, barta laga soo galo ayaa laga yaabaa inay been tahay. Is deji; suuqa yuusan kuu nacasoobin!
Dhamaan istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh tirooyinka falanqaynta farsamada ayaa soo gudbiya mabda'a - hal qalab looma isticmaali karo si loo furo macaamil ganacsi, waxaad u baahan tahay xaqiijin dheeri ah. Falanqaynta muuqaalka ah, waxaa loola jeedaa isticmaalka oscillators xad dhaaf ah / xad dhaaf ah, tilmaamayaasha isbeddelka, iyo qaababka laambadda ee amar yar. Tusaale ahaan, haddii sixitaankii ugu horreeyay ee Madaxa-ilaa-Garbaha uu ku dhammaado biinanka birta ah, wuu joojin karaa dhammaan sawirada